Goatemalà · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny Goatemalà
Lalàna02 Febroary 2019
Manaiky ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny alalan'ireto teny manaraka ireto ny andininy faha-35 ao amin'ny Lalàm-panorenana Politika ao amin'ny Repoblikan'i Goatemala. Saingy, ankehitriny (2009) anefa dia toa tsy miraharaha ireo lalàna ireo ny mpamatsy tolotra aterineto.
El Salvador02 Janoary 2019
El Salvador21 Novambra 2018
Mediam-bahoaka15 Novambra 2018
Vao nifandray mivantana tamin'i Oscar Mota mihitsy aho izao, izay nandrakotra ny faharavàna nateraky ny rivodoza Stan tao Goatemala, tao DesdeGuate.com avy tao an-tranony tao Guatemala City. Sombiny voadika tamin'ny resaka nifanaovanay avokoa ity lahatsoratra ity.
Goatemala: Firaisankina ho an'i Haiti taorian'ny horohorontany
Mediam-bahoaka03 Novambra 2018
Tamin'ny taona 1976, nisy horohorontany nahafatesan'olona miisa 23.000 tany Goatemala. Ankehitriny (2010), 34 taona taty aoriana, niray hina hanampiana ireo Haitiana tamin'ny voina noho ny horohorontany nahazo azy ireo ireo Goatemalteka, tamin'ny alàlan'ny karazana ezaka fanangonam-bola samihafa sy ny endrika firaisankina hafa.
Fanabeazana23 Oktobra 2018
Goatemala: Ny fomba hanehoan'ny indizeny ny zavakanto
Mediam-bahoaka20 Oktobra 2018
Nisy ny fankalazana ny vahoaka tompotany sy ny fomba hanehoan'izy ireo ny mari-panondroana azy tamin'ny alalan'ny zavakanto, ny teatra ary ny fitafy nandritra ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vahoaka Indizeny Manerantany. Sasantsasany tamin'ireo ohatra fanehoana famoronana ara-javakanto ao Goatemalà ihany ireto manaraka ireto.
Media sy Fanoratan-gazety16 Oktobra 2018
Ao Goatemala, ny fitantarana ivelan'ny tanàna renivohitra dia lazaina fa tsy zava-dehibe ho an'ny gazety nasionaly, ary noho izany dia tantara maro no tsy voatatitra.